Fayrka u soo baxaanka ee shahaadada biirka ee saleysata ee saleysata ee uu u soo baxeyso ee u soo guud
Waxaad halkan tihiin:Guri > Products > Architectural Mesh > Goobta codsiga ah>Sidaas daraada
Safka biirka ee burburka ah waxaa ku yaal qorsho wanaagsan iyo ciyaamooyinka codka. Waxaa ka caawinaad qaataa nidaamka guribka, goobta dabaylka iyo dabaylka, intaasoo u caddeyn kartaa badbaadada iyo dhaqaalaha biyaha wanaagsan. Inta ka fiiriya shahaadada goobta ee goobta ee gaar ah, waxay ka dhigtaa ciyaamooyinka uu la xiriirta.
Qofka la qabsashada ee cadnaa
Qofka la xiriirtay
Qaar ku fiirisan:Dambi ah.
Daryeelka xoogga ee mibaale ah ee uu sii hubsadaa nolosha dheeraad ah.
Inta codka caafimaad.
Waana u diidanayaa dab iyo dhaar ah.
Waxaan u fuwan ku nadiifiyo iyo dhawro.
Sidaas daraaddeed ayaan u siinayaa aluminium, salka la'aanta ah iyo saleedka ee galvaniga ah sidii alaab kugu habboon.
Buuska ee archikitektusada
Markii aad doorto buuxa saleyga gaar ah, iska muuqashada, saamka iftiinka, Waa in la fikiraaa xirfadeedka codka iyo xirfadda dabka.
Dadka caawimaad ee iskuulka ah waxaa laga habboon yahay sib ah.
Waxbarashada ayaa muujiyaa in goobta furan yar ka weyn uu uu uu saame wanaagsan codka. Sidoo u weyn goobaha furan, sida ka wanaagsan u fiican.
Qofka koridka waxaa ka qiimeysaa jidhka cayn ah.
Goobta booska waa doorashada ugu badan, kaasoo uu samayn karaa dabool oo ifi. Waxaan u bixinayaa adeegga ee midibka ee la xiriira.
Horey:Lacagta darafka shubka
Ka dambe :Aasaasiga birta fidiyay
Dhaqaalada ee sameeyinka aluminiuma
Dhaqaalada ahLuqada aluminiuma:1. Dadka guryaha aluminium sida isku heerka.2. Waxyaalooyinka uu uu uu u qaadaa guriga u dhexe waa in ≤ 1200 mm. Dadka iskuulka ee saleedka ee baahan ee baa waa 1200 mm....
Halka ahLuqada aluminiuma:1. Samada shahaadkaIsku xirfadeedka sabsiga ee fuurka: jidhkaalka aluminium iyo isku xirfadda aluminium, ka kaddib, ay ku leeyihiin uu wada qorsheynta iyo mudbalka cusub. Goo...
Duwga keenada aluminiuma
Labo nooc oo kale waxaa ku yaal qalabka goobta leh.Luqada aluminiuma: Saleylka fudud ah, Maxaa yeelay, qoryaha waxaa la dhibaatay dartiis iyo cilmiga dartiis, waxaannu ognahay shahaadada lacagta iyo a...
Sideey ku saabsan dafka aluminium?
SideedLuqada aluminiuma?1. Waxbarashada wanaagsan. Sida caadiga ah ee kaniisada sare ee aluminiuma ah waxaa lagu sameeyaa xarfadeed ee jiirka ah ee uu uu uu u yahay, midibo kala duwan, la xiriirta xoo...
Goobta sharciga ah ee doorashada ee furaada
Goobta shabakada doorankaFiirka ee shurka:Shamriid biyahay u baahan yahay maalmaha wanaagsan ee baahan ee baahan ee baahan ee baahan, birka, iskaashka iyo shimiikaal. Sidoo kale waa waxyaabaha ciyaha ...
Safka goobta ah
SafkaWaxaa loola jeedaa arrimaha baaritaanku uu uu uu ka gaaban yahay, taasoo uu uu soo baxa qaar badan oo ah. Si aan ku siineyso tusaale xirfad. Sida socda:Si aad u imtixaamiso heerka waxbarashada iy...
Maxay u leedahay goobta ee geedka?
(1) MidibkaSaleysaWaa ka mugdiyo midibka dhinaca, taasoo u sameeya xaaladda. Sidoo kale waxaa u yaqaan guriga odayaa iyo carruurta. Taas waxaa loogu leeyihiin, dadka dhallinyarada iyo ciidan yar ah ma...
Sidee loo sameeyaa dafka aluminium?
Ka qabanqaabiso 1 goobta horeQarso rabta ah: waxaa lagu jeedaa alaabta la xiriiray, wuxuuna la xiriiray si uu ka sameysaa rugta ee guriga ah.Luqada aluminiuma;Safsashada: isticmaaleysa mashinka la xir...